Tag: greatest song in the world
Ichi Mutero, kune Chikuru Chikuru Blog Post muNyika…
Svondo, July 15, 2007 China, June 11, 2015 Douglas Karr
Iyi haisi iyo hukuru hukuru blog posvo munyika… nooo… izvi zvinongova Mutero. Zvese kuseka padivi, ini ndadzima 3 post madhirezi mangwanani ano. Iwo akange ari mafomu andaive ndatanga kare kare asi ini ndaisatomboita senge kuti ndinogadzira iwo zvakakwana kuti atsikise. Zvichida chimwe chazvo chaive chinzvimbo chikuru kwazvo pasirese. Isu hatizomboziva. Imwe yaive yekufananidza blog nebepanhau shanduko. Yechipiri yakanga iripo